Myanmar Defence Weapons: စစ်ရေးဆိုင်ရာအမြင်များ ပြောင်းလဲသင့်ပြီလား....
Posted by MM at 12:21 PM
kyawminnag November 23, 2012 at 4:31 AM
zin794 November 23, 2012 at 5:12 AM
Must better than Bangladesh always in all arms,..
hein November 23, 2012 at 5:15 AM
မြေပုံကို ကြည့်လိုက်ရင်ဗျ...ကျွန်တော်တို့ နဲ့ ကုလားတွေရဲ့ ကုန်းပိုင်းဆက်စပ်မှုက တော်တော်နည်းတယ်..နယ်နမိတ်ကျဉ်းတယ်...စစ်မျက်နှာဖွင့်ရမှာ ကျပ်မယ်..အဲ..အရင် ထိုးစစ်ဆင်ပြီး..အဲဒီ ကျဉ်းကျဉ်းလေး
ကို အရင် သိမ်းထားရင်တော့ ကြည်းတပ်ပိုင်းက တော်တော်ကို သာမယ်ဗျ..မြန်မာ က လေတပ် သာရင်. ကြည်းတပ်က တော်တော်
အသာရမယ်...သူတို့ ကြည်းတပ်ကို ရေတပ်က နေ အမြောက်နဲ့ ပဲဖြစ် ဖြစ် ဒုံးတွေနဲ့ ပဲဖြစ်ဖြစ် လှမ်းဆော်လို့ ရတယ်မလား..သူတို့ ကို
လည်း လေတပ်နဲ့ ဦးချိုးထားလို့ ရမယ်..အရင် ဆုံးကို တပ်မတော်ရဲ့ အားသာချက် အားနဲ ချက်တွေကို ကြည့်ရ
အောင်....မြန်မာ ကြည်းတပ် က အရှေ့ တောင်အာရှမှာ အကောင်းဆုံး ပျောက်ကြားတပ်..သို့ မဟုတ်..အတွေ့ အကြုံအများဆုံးတပ်လို့ ပြောကြတယ်..သို့ ပေမဲ့ .အခု ထိ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ တိုက်
ခဲ့ တဲ့ တိုက်ပွဲတိုင်းမှာ..အရင် မြောက်နဲ့ ပစ်ပြီးမှ တက်သိမ်း ဒါပဲအများဆုံးလုပ်နေတာတွေ့ ရသလို ပဲ(ကျွန်တော် မသိတာလည်းရှိမှာပါ)..အထူးအရေးကြီးတာ က မြန်မာ တပ်တွေက အထူးတပ်မရှိ
တာပဲဗျ. အထူးတပ်လို့ ပဲခေါ်မလား..အသေခံတပ်လို့ ပဲခေါ်ရမလား..ကွန်မန်ဒိုလို့ ပဲခေါ်ရမလား..အဲဒီ တပ်တွေ ဟာ.. တပ်မတော်ရဲ့အလစ်အခိုက်တိုက်ခိုက်မှု.. ရန်သူ့ နောက်ပိုင်းကို ထိုးဖောက်
နိုင်မှု.သတင်းအချက်အလက်ရယူပေးနိုင်မှု..ရန်သူတွေကို ခြောက်ခြားနိုင်မှု..ရန်သူ့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကို ခြိမ်းခြောက် အန္တရာယ်ပေးနိုင်မှု စတဲ့ အပိုင်းတွေမှာ မရှိမဖြစ်ပါ..အစ္စရေးလ်တပ်တွေ
အီဂျစ် တပ်တွေရဲ့ ထိုးစစ်ကို မတားနိုင်တော့ ဘာလုပ်လဲ..သူတို့ တပ်တွေအနောက်ကို ကွန်မန်ဒိုတွေ ထည့်လိုက်တယ်..ထောက်ပို့ လမ်းကြောင်းတွေကို ဖြတ်တောက်ခိုင်းလိုက်တယ်..အဲ တတိယ
အာရပ် အစ္စရေးလ် စစ်ပွဲလဲပြီးရော.ကမ္ဘာ ကမြင်ကြတယ်..အီဂျစ်တွေစစ်နိုင်လိုက်တယ်ပေါ့..အဲ တကယ့်တကယ် နယ်မြေသိမ်းထားနိုင်မှုလည်းယှဉ်ရော..အဲဒီမှာကွာသွားတာပဲ.ဟို က ကွန်မန်ဒိုတပ်တွေက
က .အီဂျစ်တပ်တွေရဲ့ နောက်မှာ.. နယ်မြေတော်တော်များများမှာ.. ခြေကုပ်ယူပြီးနေပြီ.. ကုလက စစ်ရပ်ခိုင်းပြီး နယ်မြေခွဲတော့ အီဂျစ်တွေ ဒုံးရင်း က ဒုံးရင်းပဲ..သူတို့ အသာရတာ စူးအက်တူးမြောင်း
ကို ထိန်းချုပ်ခွင့်ပေါ့လေ..ဒါပေမဲ့ အရင် ခြောက်ရက်စစ်ပွဲမှာ.အစ္စရေးလ်တွေ က အများကြီး ကို သိမ်းထားတာ..ခုထိ.. အဲ..လေကြောင်းက ထောက်ပို့ တော့လိုတာပေါ့လေ..လေကြောင်းပေါ့..အဲ ပြီးတော့
အစ္စရေးလ်းတွေက ဘာအသာစီးရလဲဆိုတော့....သတင်းအချက်အလက်ဗျ..စစ် မစခင်..သုံးနှစ်လောက်
ကတည်းကအစ္စရေလ်းတွေက သတင်းတွေအားလုံးကို စုဆောင်း ပြင်ဆင်နေကြခဲ့ တာ
ဆိုပဲ..ဘယ်လို လဲ ကျွန်တော်တို့ တပ်မတော်က သတင်းအချက်အလက် ပိုင်းမှာ အဆင်ပြေရဲ့ လားဗျာ.အရင်က မြန်မာက ဂြိုဟ်တု
လွတ်မယ်ကြားတော.့နည်းနည်းတော့ မိုက်မယ်လို့ တော့ ထင်ခဲ့သားဗျ..ကျွန်တော်တို့ က ကုလားတွေဘာလုပ်နေလဲ နယ်စပ်မှာ ဘာတွေ လှုပ်ရှားနေလဲ ကအစ အားလုံး သိထားသင့်တယ်နော.
ပြီးတော့ လေ့ကျင့်မှု ကတော့ ခုထိအားနည်းနေတယ်လို့ ထင်တယ်ဗျာ.. စိတ်ဝင်စား ဖို့ ကောင်းတဲ့ တစ်ချက်လည်းရှိသေးတယ်..အဲဒါကတော့ ကုလားတွေက စစ် အင်အားအရမ်းသာလို့ ထိုးစစ်
ဆင်လာခဲ့ ရင် စဉ်းစားစရာပေါ့ဗျာ(ဖြစ်တော့ မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးဗျ).ကျွန်တော်တို့ ဆိုဗီယက်တွေ ဂျာမန်တွေကိုဘယ်လို ခုခံခဲ့ လည်းဆိုတာ လည်း လေ့လာထားသင့်တယ်ဗျ..ဘာလို့ လဲဆိုတော့
ဆိုဗီယက်တွေက ပထ၀ီကိုသုံးပြီး ဂျာမန်တွေကို ပြန်ချခဲ့တာကိုးဗျ..ဆိုဗီယက်မြေက အကျယ်ကြီး..ဂျာမန်မြေကကျဉ်းတယ်..ယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်..မြန်မာမြေက အကျယ်ကြီး..ကုလားနိုင်ငံက ကျဉ်းကျဉ်း
လေး..အဲအခြေအနေတော့ မြန်မာတွေ ဘယ်တော့ မှရောက်လောက်ပါဘူးဗျာ.နော.. အဲတော့ ကျွန်တော်တို့ အစ္စရေးလ်ကိုပဲ အတုယူကြတာပေါ့..အစ္စရေးလ်က လူဦးရေနည်း..အာရပ်တွေကအများ
ကြီး..ခုလည်း ကုလားနိုင်ငံက လူဦးရေများတယ်..မြန်မာ က လူဦးရေနည်းတယ်(ဒါပေမဲ့ စစ်သားတွေကတော့ နည်းဘူးမလား)ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်..အစ္စရေးလ်က အကောင်းဆုံးဥပမာပဲဗျာ..
အဲတော့ စဉ်းစားရအောင်ဗျာ..ကျွန်တော်တို့ လေတပ်ကို အရင် UPGRADE လုပ်မလား..ရေတပ်ကို အရင်လုပ်မလား.. အားလုံးတော့ လုပ်ရမှာပဲ..ဒါပေမဲ့ အရင် ဦးစားပေးပေါ့ဗျာ. ကျွန်တော်လည်း
သေခြာတော့ ပြောတတ်ဖူးဗျာ..ရင်ထဲရှိတာတွေ ချပြောလိုက်တာ ဟိုရောက်ဒီရောက်တွေ ဖြစ်ကုန်တယ်...ဆောရီးပါဗျာ.
Zeus November 23, 2012 at 7:12 AM
ကျွန်တော်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဘဲပြောပါ့မယ်။ ပြဿနာကတော့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းပါဘဲ။ အမှန်တိုင်းသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်နိုငိမှုလိူသလို တကယ်လိုအပ်ပြီးအသုံးဝင်မဲ့လက်နက်နဲ့နည်းပညာတွေရှိဖို့လိုပါတယ်။နိုင်ငံကချမ်းသာသေးတာမဟုတ်တော့ဝယ်ယူရာမှာ constraints တွေအများကြီးရှိပါတယ်။
အတိတ်ကကျွန်တော်တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဟာနည်းပညာကိုလဲမကျွမ်ကျင်၊ပြောတာကိုလဲနားမထောင်တတ်ဘဲကိုယ်ထင်ရာကိုယ်ကောခဲ့ကြတာတွေများခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲပြည်ပကလက်နက်တွေဝယ်ခဲ့တဲ့အခါအမှားအယွင်းတွေများခဲ့ကြတာတွေမနည်းတော့ပါဘူး။ ဒါတွေကိုလက်ရှိinservice မှာသုံးနေကြတဲ့နောင်တော်၊ညီတော်တွေအသိဆုံးဖြစ်ကြမှာပါ။ပြုန်းတီးခဲ့တဲ့နိုင်ငံဘဏ္ဍာတွေလဲမနဲတော့ပါဘူး။နောက်ဆုံးလက်နက်ရောင်းသူတွေနဲ့ agent fees ရသုတွေသာအကျိုးအမြတ်ဖြစ်သွားကြတာပါဘဲ။
နောက်ပြီးmorale ပိုင်းကိုလဲပြင်ရပါမယ်။ ဘင်္ဂလားစစ်တပ်ကိုဘဲကြည့်ရင်တပ်သားတိုင်းဟာuniform, combat gear ကအစ၊စည်းကမ်းအဆုံးသေဝပ်ကောင်းမွန်ပါတယ်။ သာဓကပြရရင်၊on duty မှာညှပ်ဖိနပ်ဝတ်တာမရှိပါဘူး၊ UN peace keeping forces တွေမှာတောင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့professional စစ်တပ်ပါ။ ဒါကိုမှီအောင်အရင်လုပ်နိုင်ရပါမယ်။
နောက်တချက်က ဝယ်ယူတားတဲ့ပစ္စည်းများကိုလဲကျွမ်းကျင်စွာကိုင်တွယ်နိုင်ရပါမယ်။ မျောက်အုံးသီးရသလိုမဖြစ်ရပါဘူး။
ကျန်တချက်ကတော့တပ်မတော်ရဲ့tactics အပိုင်းပါဘဲ။ Infantry ပိုင်းမှာအတွေ့အကြုံရှိပေမဲ့၊ armor, artillery, anti-aircarft defence ကဲ့သို့ technical units တွေပါလာတဲ့အခါ၊ အားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိလာပါတယ်။ ပမာပြရရငsniper team ရယ်လို့တောင်ကောင်းကောင်မရှိပါဘူး။ Cobra Gold လို wargames မှာ observer အနေနဲ့ပါသင်ခွင့်ရတာ up grade လုပ်ဖို့အခွင့်ရေးတခုပါဘဲ။
William Tun Tun Ko November 23, 2012 at 7:57 AM
ဟိန်း ဆွေးနွေးထားတာကြည့်ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ တပ်တည်တွေကိုကြည့်မိတယ်၊ နပခ မှာ ခြေလျင်တပ်ရင်း ၃၃ ရင်း + ဒစက တစ်ခု ၁၀ရင်းထားပါ + စကခ ၃ ခု ၃၀ ရင်းထားပါ ရှိတာတွေ့ရတယ်။ ၇၃ ရင်းပေါ့ ၊ နပခ စာရင်းထဲ ဒစက၊ စကခ မပါဘူးဆိုရင်ပေါ့လေ။ ထားပါ အခုခေတ် ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ဆိုရင် ၇၃ x ၂၀၀ = ၁၄၆၀၀ ခြေလျင်စစ်သား ၁၅၀၀၀ လောက် ဘကုန်း စစ်မျက်နှာကို ကာကွယ်နေတယ်ပေါ့။ အနီးဆုံး ငဖဲမှာ အမြှောက်တပ်မ ၉၀၅ ရှိတယ်၊ အနီးဆုံး မလွန်မှာ သံချပ်ကာ တပ်မ ၇၃ ရှိတယ်။ စစ်တွေမှာ လေကာ တစ်ခု၊ လေတပ်စခန်းဌာနချုပ်တစ်ခု၊ စစ်တွေမှာ ရေတပ်စခန်းဌာနချုပ်တစ်ခုကျောက်ဖြူ နဲ့ သံတွဲမှာ ရေတပ်စခန်းတစ်ခုစီ ရှိတာတွေရတယ်။ လေယာဉ်တွေ၊ ရေယာဉ်တွေ ဘယ်လောက်ရှိလဲတော့ မသိဘူးပေါ့လေ။ ဒီတော့ ဒီတပ်တည်တွေနဲ့ တွက်ကြည့်ရရင်တော့ သမားရိုးကျစစ်ပွဲ တစ်ခုအတွက် သိပ်အားမနဲတဲ့ စစ်အင်အားလိုပြောလို့ရ တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အရည်အတွက်ထက် အရည်အချင်းက ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ တို့ဗမာ့တပ်မတော်ဟာ သူများကို Invade လုပ်ဖို့ ဖွဲ့စည်းထားခဲ့တဲံတပ်မဟုတ်လို့ Invasion မှာတော့ ဘယ်လိုရှိမလဲ မပြောတတ်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ Defensive မှာတော့ ဘကုန်းတပ်မပြောနဲ့ အမေရိကန်တပ်တောင် တို့မြေတစ်လက်မကို လွယ်လွယ် ရမှာမဟုတ်တာကိုတော့ အာမခံရဲပါတယ်။ ခြေလျင်တပ်တွေကို စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးတပ်တွေမှာ အနည်းဆုံး ၄လ လောက်တော့ စစ်ပညာသင်ပေးနေတာဘဲလေ၊ ဒို့ခေတ်တုန်းကတော့ ၆လ ကောင်းကောင်းပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ အမိမြေ ကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်လာရင်တော့လေ့ကျင့်မှုကောင်း ကောင်း မကောင်း ကောင်း ဗမာစစ်စစ်တွေအတွက်ကတော့ ကျူးကျော်သူကို အသက်ဖက်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ဖို့ သိပ်အပန်းမကြီးလောက်ဖူးထင်တယ်နော်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုတော့ ရှိမယ် သူများမြေကို ကျူးကျော်ဖို့ဆိုရင်တော့ မပြောတတ်ဘူး။ အဲဒီတော့ ဘကုန်းတွေ တို့ မြေထဲဝင်လာရင် (အခုဝင်လာနေပြီလို့ တော့မပြောနဲ့) စစ်ကြေညာပြီးဝင်လာရင် တို့ ဗမာတိုင်းရင်းသားအကုန်လုံးက (ကချင်၊ကယား၊ကရင်၊ချင်း၊မွန်၊ဗမာ၊ ရခိုင်၊ရှမ်း) အားလုံးက အသက်ပေးပြီးကာကွယ်ကြလိမ်ုမယ်ဆိုတာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်။
William Tun Tun Ko November 23, 2012 at 8:12 AM
အပိုလေး ထပ်ကွန့်ချင်ပါတယ်၊ ကုန်းဘောင်ခေတ်တုန်းက လက်နက်မကောင်းလို့ စစ်တပ်က Professional မဟုတ်လို့ ခေါင်းဆောင်တွေေ-ာက်သုံး မကျလို့ စစ်ရှုံး ပြီး လွတ်လပ်ရေး ဆုံးရှုံးခဲ့ရတုန်းကတောင် အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့ တန်ဘိုးက အာဖရိက တို့ အန္ဒိယ တို့ထက် များခဲ့တာ မြန်မာပြည်ပါ၊ ဘုရင်ပါသွားတာတောင် တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကို ၁၀ နှစ် လောက် နှိမ်နင်းခဲ့ရတဲ့မြန်မာပြည်ပါ၊ East India Company ရဲ့တပ်တွေနဲ့တင်မနိုင်လို့ ဘုရင်မ တပ်တွေပါ တိုက်ခဲ့ရတာပါ။ တိုင်းရင်းသားတွေကလည်း တိုင်းတပါးကျူးကျော်မှုကို ၀ိုင်းပြီးလက်မခံခဲ့ကြပါဘူး။
William Tun Tun Ko November 24, 2012 at 5:39 AM
ဟိန်း နဲ့ ZEUS ဆွေးနွေးထားတာ Professional ဖြစ်ပါတယ်၊ နဲနဲပါဝင်ခြင်ပါတယ်၊ စစ်သားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆိုရင်တော့ တပ်တည်တွေပေါ့လေ ကြည့်ရအောင်၊ သူတို့တပ်တည်ကိုတော့ မသိဘူးဗျာ၊ ဘယ်လိုရှိနေလဲမသိဘူးပေါ့၊ သိတဲ့သူကတော့ သိသလို တည်ကြည့်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်တပ်တည်ကတော့ ကိုယ်သိသလောက် - နပခ မှာ ခြေလျင်တပ်ရင်း ၃၃ ရင်း၊ စကခ တစ်ခု ၁၀ ရင်း၊ ဒကစ ၃ ခု ရင်း ၃၀ ဆိုတော့ စုစုပေါင်း ခြေလျင် စစ်တပ် ၇၃ ရင်း X ၂၀၀ လက်ရှိဖြစ်တတ်သလောက် ဖွဲ့စည်းပုံ ပေါ့။ ဆိုတော့ ခြေလျင်စစ်သား ၁၅၀၀၀ လောက်တော့ Ready to combat ပေါ့လေ၊ အမြောက်တပ်မ တစ်ခု ပေါ့ ငဖဲမှာ ၉၀၅ ရှိတယ်လေ၊ တင့်/သံချပ်ကာ တပ်မ တစ်ခုပေါ့ မလွန်မှာ ၇၃ ရှိတယ်လေ၊ ဆိုတော့ကာ ကီလိုမီတာ ၂၀၀ - ၃၀၀ လောက်ရှိနိုင်မဲ့ Defensive Line တစ်ခုမှာ ခြေလျင်စစ်သား ၁၅၀၀၀ လောက် အမြောက်တပ်မ တစ်ခုလောက် နဲ့ သံချပ်ကာ တပ်မ တစ်ခုလောက်ဆိုရင်တော့ defensive position အရ သိပ်မဆိုး ဘူး ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါက ကိန်းဂဏန်း အရဘဲ ပြောတာနော်။ နောက်ပြီး စစ်တွေမှာ လေကာ တပ်မ တစ်ခု၊ လေတပ်စခန်းဌာနချုပ်တစ်ခု၊ ရေတပ်ဌာနချုပ်တစ်ခု နဲ့ ကျောက်ဖြူ၊ ရမ်းဗြဲ နှင့် စစ်တွေတို့မှာ ရေတပ်စခန်းတွေနဲ့ဆိုတော့ မဟာဗျူဟာ၊ နည်းဗျူဟာ တွေအရတော့ သိပ်မဆိုးဘူး ပြောရမှာပေါ့။ အဓိက ကတော့ ဗျူဟာချမှတ်မဲ့ လူကြီးတွေနဲ့ဘဲ ဆိုင်တာပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခု Assure ဖြစ်တာက ဗမာ့/မြန်မာ့ တပ်မတော် ဟာ Offensive ဆိုရင် မပြောနိုင်ပေမဲ့ Defensive မှာတော့ ဘကုန်းတပ်လောက်မပြောနဲ့ US Army ကိုယ်တိုင်ဆိုရင်တောင် ဗမာ့/မြန်မာ့ မြေကို လွယ်လွယ် နဲ့တော့ မပေးဘူးဆိုတာ မောင်ရင်တို့သိထားစေခြင်ပါတယ်။May be လေ့ကျင့်ရေးတွေ၊ L of C တွေ၊ ထောက်လှမ်းရေး နည်းပညာတွေ စသဖြင့် စစ်အောင်နိုင်ရေး အတွက် လိုအပ်မဲ့ အချက်တစ်ချို့ လိုအပ်ရင်လိုအပ်နေမှာ ဖြစ်ပေမဲ့၊ အဓိက မောင်းနှင်အား တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဗမာ့/မြန်မာ့ တပ်မတော်သားတွေရဲ့  Will to fight ကိုတော့ အထူးသဖြင့် Defensive Position မှာ ဘယ်လိုမှ/ ဘယ်သူမှ မဖျောက်ဖျက်နိုင်ပါဘူးကွာ။ တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း မလိုအပ်ဘဲ တိုက်ခိုက်နေရတဲ့ စစ်ပွဲတွေမှာ မရှုမလှ ရှုံးနေတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ တပ်တွေကို တိုင်းတပါး ကျူးကျော်စစ်ပွဲ တွေ တိုက်ခိုင်းကြည့်ပါလား၊ ဒို့ဗမာ့/မြန်မာ့တပ်မတော်သားတွေ ဘယ်လိုတိုက်ကြမယ်လို့ မောင်ရင်တို့ ထင်ပါသလဲ၊
htet November 26, 2012 at 11:48 PM
ဘ ကုန်းကိုဂရုစိုက်စရာကိုမလိုပါ မြောက်ကိုရီးယားဆီက. တာလတ်ပစ်ဒုံးပျံ အစင်း(၄၀၀၀) ဝယ်ပြီးပြီ သန်း၁၀၀၀ ကျော်ဖိုး
Ko P December 1, 2012 at 8:32 PM
ကျွန်တော့်အမြင်ကိုပြောရင်တော့ လေ့ကျင့်မှုပိုင်း ပစ်ခတ်နိုင်စွမ်း လက်နက်တွေရဲ့ ကြံ့ ခိုင်ရေးတွေ တပ်တွေရဲ့ စစ်ရေး အသင့်ဖြစ်မှုတွေကို မြင့်တင်ဖို့လိုအပ်နေပါသေးတယ်။ တပ်တွေရဲ့  စိတ်ဓာတ်ရေးရာကိုလည်း မြှင့်တင်ရပါမယ်။ ဥပမာ ယူနီဖောင်းပေါ့။ လေ့ကျင့်မှုပိုင်းက အဓိက ကျပါတယ်။ ယခုလုပ်နေတဲ့ လေ့ကျင့်မှုတွေ က ကွင်းပြင်ထဲက ရွေ့ လျားမှု မရှိ အဆီးအတား မရှိတဲ့ ပုံသေပစ်မှတ်ကို သာလွန်အင်အားနဲ့ ထိုးစစ်ဆင်တဲ့ လေ့ကျင့်မှုပါ။ လက်တွေ့ စစ်မြေပြင်နဲ့ တခြားစီပါ။ ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရရင် တနိုင်ငံလုံးက တပ်တွေကို တနေရာထဲကို ဆင့်ခေါ်ပြီး လုပ်တဲ့ ယခုလိုလေ့ကျင့်မှုတွေ မလိုဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုးစစ်အတွက် အသုံးဝင်မှာပါ။ ခုခံစစ်ကိုလေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ စစ်ဌာနချုပ်အလိုက် လက်တွေ့ရင်ဆိုင်ရမယ့် စစ်နယ်မြေ အသီးသီးမှာ လိုက်လျောညီထွေရှိနိုင့်မယ့် စစ်ဆင်ရေးပုံစံတွေ လေ့ကျင့်သင့်ပါတယ်။ မြို့ တွင်းတိုက်ပွဲတွေကိုလည်း လေ့ကျင့်ထားရပါမယ်။ စစ်ရေးအချက်အခြာကျတာ မြို့ ပြပါ။ အဆုံးအဖြတ်ပေးတာက မြို့ သိမ်းတိုက်ပွဲတွေပါ။ ကိုယ်က တိုက်ရရင်လည်း အရပ်သားတွေကို မထိခိုက်အောင်။ ကိုယ့်ကိုတိုက်လာရင်လည်း အရပ်သားတွေကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်အောင် လေ့ကျင့်ရပါမယ်။ ဒါအရေးကြီးပါတယ်။ ပြည်သူချစ်တဲ့ ပြည်သူ့ တပ်မတော်ဖြစ်လာအောင် လုပ်ဆောင်ရာမှာ အရေးကြီးပါတယ်။ ယခင်က တပ်မတော်ကို လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးနေတာ ပြည်တွင်း သင်တန်းများနဲ့ တရုတ်၊ ရုရှားတို ပါ။ ပြည်တွင်း တပ်မတော် အရာရှိမျာစအနေနဲ့ ခေတ်သစ် မြို့ တွင်း တိုက်ပွဲများနဲ့ ကင်းကွာနေတာကြာပါပြီ။ တရုတ်နဲ့ရုရှားကတော့ အစကတည်းက အရပ်သားအသေအပျောက်ကို အလေးမထားတဲ့နိုင်ငံတွေပါ။ ဒါကြောင့် အရပ်သား အကာအကွယ်ပေးမှုပိုင်းမှာ တပ်မတော် အနေနဲ့ အားနည်းနေပါတယ်။ နောက်ပိုင်း အမေရိကန် ကူညီရင်တော့ မဆိုးဘူးပေါ့နော်။ ပစ်ခတ်နိုင်စွမ်းကတော့ ပြောစရာတောင်မလိုဘူး။ KIA နဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာ ပေါက်ပေါက်ဖောက် သလိုပဲတဲ့။ ကောင်းပါတယ်။ ပစ်နိုင်တာ။ ဒါပေမယ့် ပစ်တာတွေကလည်း မှန်ဦးမှလေ။ ဒီတော့ လေ့ကျင့်ရေးအတွင်း များများပစ်ခတ် လေ့ကျင့်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ အမေရိကန် စစ်သည်တွေကို အကောင်းဆုံးလို့ ပြောကြတာ တကယ်တော့ မြန်မာစစ်သည်တွေထက် ထောက်ပံ့မှုပိုင်းမှာ သာလို့ ပါ။ တခြားမှာ မြန်မာက မညံ့ ပါဘူး။
လက်နက်တွေရဲ့  ကြံ့ ခိုင်မှု ကတော့ အရေးကြီးတာ ပြောနေစရာတောင် မလိုပါဘူး။ စစ်ရေး အသင့်ဖြစ်မှုကတော့ တပ်မတော် အနေနဲ့ အများကြီး အားနည်းပါတယ်။ လုံလောက်တဲ့ ကင်းလှည့် အင်အား မချထားနိုင်လို့ ရယ် ရန်သူကိုလျှော့ တွက်လို့ ပါ။ အခုအချိန်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နဲ့ပဲ ပြသနာရှိပေမယ့် နယ်စပ်တိုင်းဟာ အသင့်ရှိနေရပါမယ်။ အင်အားကတော့ ရေတပ်နဲ့ လေတပ်ကို အဓိက အားဖြည့် ရပါမယ်။ နောင်တတ်နိုင်မယ် ဆိုရင် ဂြိုဟ်တုကတော့ စောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့ လို ပါတယ်။ ရေတပ်အင်အား နည်းမှုဟာ အများကြီး သိသာပါတယ်။ နယ်စပ်ပင်လယ်ပြင်ကနေ ခိုးဝင်တာတွေ နေ့ စဉ်ရှိနေပါတယ်။ ရန်သူ့ကိုမန်ဒို တပ်တွေသာ ဖြစ်နေခဲ့မယ် ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့စစ်ရေး အချက်အခြာနေရာ တွေ တပြိုင်နက် ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခံရရင် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေ ဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်ခံရရင် အထိနာနိုင်ပါတယ်။ အခုအချိန်န်ုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး အခြေအနေ အရ ထိုးစစ်ထက် ခံစစ်ကို ဦးစားပေး ပြင်ဆင်သင့် ပါတယ်။ ဆွေးနွေးပေးကြပါဦးဗျာ။
Ko P December 7, 2012 at 7:29 PM
naydoon December 23, 2012 at 6:34 AM
ဟူး...ဘယ်ကစပြောရမလဲ စစ်တပ်အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင် ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးထောင်ပေါ့ဗျာ စစ်တပ်အကြောင်းမပြောနဲ့လို့ ကျွန်တော်တုိ့ အချင်းချင်း စကြတာရှိတယ်။ပြောလို့ဆုံးမှာ မဟုတ်လို့ပါ။ပြင်ရမှာတွေက အများကြီးပါ။ဘာလို့ပြောနေလဲဆိုတော့ အားမလိုအားမရဖြစ်နေလို့ပေါ့။ဖြစ်စေချင်နေတာ လုပ်စေချင်နေတာ တက်စေချင်နေတာ သိစေချင်နေတာ ချင်ခြင်းတွေများပြီးဘာမှဖြစ်မလာလို့ခုတော့ စိတ်ဓါတ်လဲချွတ်ခြုံ ကျနေပါပြီ စစ်တပ်မှာတစ်ယောက်တည်း ချင်ခြင်းတက် နေလိုတော့ ဘယ်ရမလဲနော့။ပြောင်းလဲသွားအောင် လုပ်ဖို့ကလဲ အစွမ်းအစ ကလဲမရှိပဲကိုး။ပြောချင်တာကို မရောက်တော့ဘူး။army ကဆိုတော့ အမြင်ကနည်းနည်းကျဉ်းမယ်ထင်ပါတယ်။အဓိက ကျတာလူပဲဗျ။လိုအပ်ချက်အရဆိုပြီး ဖြစ်သလိုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ တပ်သားသစ်စုဆောင်းရေး တွေကြောင့် အထူးသဖြင့် လ/မ တွေမှာ အရည်အသွေး အရည်အချင်း ခံယူချက်မရှိတဲ့ တပ်သားတွေ ရောက်လာတယ်။အခြေခံစစ်သင်တန်း ၄လ တာကာလလေးမှာ လဲ စစ်ပညာနဲ့ စစ်စည်းကမ်း ဆိုတာ သေချာမသိပဲ လ/မ တွေကို ရောက်လာတယ်။သင်တန်းကျောင်း တွေမှာလဲ လိုအပ်ချက်အရဆိုတဲ့ fatigue တွေကလဲ များတာကို ။နည်းပြတွေကသေချာ မသင်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။လိုအပ်ချက်အရပါ။အဲ့ဒီ့ လိုအပ်ချက်တွေကလဲ ဘယ်တော့မှပြီးပြည့်မယ်မထင်ဘူး။foundation မကောင်းပဲနဲ့တော့ ခေတ်မှီတပ်မတော်ကြီး ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ပိုက်ဆံချမ်းသာလို့ ခေတ်မှီလက်နက်ဝယ်နိုင်တယ် ထားအုံး ပညာအရည်အချင်းနည်းတဲ့ တပ်သားတစ်ယောက်ကို ကိုင်တွယ်တက်အောင် သင်ပေးဖို့က မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါ။ဘယ်လောက်ပဲ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် ရှိရှိပါ။ဘယ်လိုပဲ သင်ပေးသင်ပေး လုံးဝ မတက်တဲ့သူတွေ ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်။အရည်အချင်းမရှိပဲနဲ့ ရာထူးရနေတဲ့လူတွေ အများကြီးပါ။ကျွန်တော့်သဘောဆိုရင် အကုန် Demotion လုပ်ပြစ်မယ်။အမှန်တကယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်အဆင့်က corporal လောက်ပဲဖြစ်သင့်တယ်။ရာထူးတွေ မလိုအပ်ပဲဖောင်းပွနေတယ်။အရည်အချင်းရှိပြီး စစ်သားစိတ်အပြည့်ရှိတဲ့လူတွေ ချောင်ထဲရောက်နေတယ်။သင်တန်းတစ်ခုမှာ အကြံပြုစာရေးခိုင်းတယ်။အရှိအတိုင်း အမြင်အတိုင်း ရေးလိုက်တယ် လေ့ကျင့်ရေးလုပ်တာ အရမ်းအားနည်းပါတယ်လို့ ။သင်တန်းမှူးကဘာပြောလဲဆို တော့ အဲ့ဒီ့ သင်တန်းသားအနေနဲ့ ပြောသင့်မပြောသင့် ဆိုတာ မစဉ်းစားမဆင်ခြင်နိုင်ဘူးထင်တယ်တဲ့ နောက်တစ်ခါ ဒါမျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့ ကျောင်းသားနံပါတ်နဲ့တော့ ထုတ်မပြောပါဘူး။တပါတ်စဉ်တည်း အူကြောင်ကြားတွေကပြောကြတယ် သောက်ရူးတဲ့။ကဲ စစ်တပ်ထဲမှာ ဘယ်လိုနေရမလဲ။ဘုရားဖြစ်မယ့် အုတ်နီခဲ မဟုတ်မှန်းလဲ သိပါတယ်။
ဖောရှောပဲနေပေါ့။ အဲ့ဒီ့ ဖောရှောတွေများနေလို့ လက်ရှိတပ်မတော် အရည်အသွေးကျနေတာ။အကြောင်းအရာတွေက ဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့။ဒါပေမယ့် ရင်ထဲကလာတာတွေပါဗျာ။အမှားပါရင်လဲ ခွင့်လွတ်ကြပါ။အထက်မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲ ပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးပါ ရေးရမှာ ပျင်းလို့ ။ဒီcomment ကိုကျွန်တော့် blog မှာလဲ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့ တင်ပါမယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရရင် ကျွန်တော် ဘာကောင်မှ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အားလုံးကိုလေးစားစွာဖြင့်...
မင်းကိုအရင်ဆုံး demotion လုပ်မယ်။ အခုချက်ချင်း ထွက်ကွာ(အရှင်ထွက်နော်)
ဗထူး January 29, 2013 at 4:05 AM
ကျွန်တော်လဲ မြန်မာစစ်သားတွေ ရဲ့ စစ်ဝတ်စုံ ပြောင်းလဲသင့်ပြီလို့ ထင်ပါတယ် အဲ့ဒါမှစစ်သားတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်လဲ မြင့်တက်လာမှာပေါ့ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာစစ်တပ်ဟာ အမေရီကန်စစ်သားတွေထက်ပိုကောင်းတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ရှိတဲ့အတိုင်းပြောတာပါ
Redhawk February 21, 2013 at 2:00 AM
နည်းပညာကစကားပြောပါတယ် နည်းပညာဆိုတာစူး စမ်းမှရတာ ဘာနည်းပညာမဆိုအသေးအဖွဲ့ကအစ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့တော့လိုအပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ဘယ်ပညာကိုမဆို အသုံးပြုစရာနေရာမရှိရင် အသုံးမဝင်ဖြစ်သွားတက်ပါ တယ်
kyaw lin March 17, 2013 at 5:32 AM
We must have atomic bomb.
nyanpwintaung June 11, 2013 at 1:23 AM
F-7ဆိုတာကတော့မဖြစ်နိုင်လောက်တော့ဘူးထင်တယ်။တစ်နိုင်ငံတည်းကြည်လို့ မှမရတာGeneral တိုက်ရင်တောင်မှခံတပ်ကိုအရင်လုံအောင်ဆောက်ပြီးမှAttackကိုလုပ်ရတာပဲလေကိုယ်နိုင်ငံလုံပြီလားမလုံလားသေချာတော့တွေးပေါ့။Mig-29လောက်ကိုမပြောလိုပေမဲ့F-7ဆိုတာကအရေအတွက်သာများတာ အရည်အချင်းမရှိဆိုတာလိုဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာ။နည်းနည်းနဲ့ကျဲကျဲဝိုင်းပေါ့ခုဟာတွေမျိုးဆက်၎ခုလောက်ကိုပြတ်နေခဲ့ပြီ။သံချပ်ကာခေတ်မှီတာလောက်ကိုတော့ပြောလို့ မရဘူးလေ။။။။။။။။။။။ကျွန်တော်ပြောတာတွေရိုင်းရင်တောင်ပန်ပါတယ်ဗျာအားမရလို့ ပါ။